Android-x86 9.0-r1 inouya nerutsigiro rwemazhinji-ekubata mapaneru | Linux Vakapindwa muropa
Ini ndaive preliminary version kubva kupera kwaNovember, asi yanga isiri yepamutemo kusvika mashoma apfuura. Android-x86 9.0-r1 yave kuwanikwa, inova yekutanga yakagadzikana vhezheni yemakomputa edesktop zvinoenderana neGoogle's mobile operating system mune yayo yepfumbamwe vhezheni. Kuti ive yakanyanya kutaurwa, kuburitswa kutsva kunoenderana neApple 9.0.0 Pie, yazvino vhezheni yekuisa zviwitsi muzita rayo uye yaiwanikwa kubvira zhizha 2018 yemafoni nhare.
Pakati pezvakakurumbira zvitsva, uye sezvazvinoitika mune mamwe masisitimu anoshanda kubva kune vamwe vanogadzira, pane yakagadziridzwa kernel. Android-x86 9.0-r1 inosvika ne Linux 4.19.105, inova ndiyo yazvino LTS musimboti. Uye zvakare, rutsigiro rwehardware nyowani rwakawedzerwa, senge akawanda-ekubata mapaneru, odhiyo, WiFi, Bluetooth, uye mamwe ma sensors. Pazasi iwe une runyorwa ruzere rwemashoko akave akaiswa mune iyi vhezheni.
1 Chii chitsva mu Android-x86 9.0-r1
2 Iyo itsva ISOs yave kuwanikwa
Chii chitsva mu Android-x86 9.0-r1
Iyo inotsigira zvese zviri zviviri 64-bit uye 32-bit kernels uye nzvimbo dzevashandisi neazvino LTS 4.19.105 kernel.
Tsigiro yeOpenGL ES 3.x kumhanyisa Hardware yeIntel, AMD, Nvidia uye QEMU (virgl) kubva kuMesa 19.3.4.
Tsigiro yeOpenGL ES 2.0 yakaverengerwa kuburikidza neSwiftShader yekupa software pane isingatsigirwe GPU zvishandiso.
Tsigiro yemahara yakakurumidza macodec pane zvishandiso zvine Intel HD uye G45 mifananidzo yemhuri.
Tsigiro yeiyo Yakachengeteka Boot kubva kuEFI uye UEFI disk kuisirwa.
Chinyorwa-chakavakirwa GUI simaki.
Rutsigiro rwemusoro rwakawedzerwa kuGRUB-EFI.
Inotsigira multi-touch, odhiyo, Wi-Fi, Bluetooth, sensors, kamera, uye Ethernet (DHCP chete).
ikozvino inofananidza iyo adapta yeWiFi pamidziyo ine Ethernet chete kuti iwedzere kuenderana kwekushandisa.
Kuzvisarudzira kwekunze usb drive uye sd kadhi.
Bharaki rebasa rakawedzerwa seimwe simudziro inoisa yekutanga menyu uye yazvino maapplication tray kumusoro kwechiso uye inotsigira yemahara-fomu windows windows.
ForceDefaultOrientation yakagoneswa pamidziyo isina maseru anozivikanwa. Portrait application inogona kumhanya pane yakatwasuka mudziyo pasina kutenderedza iyo skrini.
Ikozvino inotsigira maARM ekuvakisa ekushandisa kuburikidza neyemuno bridging mashini (Zvirongwa -> Android-x86 Sarudzo, 64-bit chete).
Tsigiro yekuvandudza kubva kune zvisiri pamutemo
Ongororo yekuyedza yeVulkan yakawedzerwa kune iyo nyowani Intel uye AMD GPUs. (Iwe unofanirwa kutanga nekufambira mberi Sarudzo -> Vulkan Tsigiro).
Mouse yekubatanidza rutsigiro rwemuchina chaiwo kusanganisira VirtualBox, QEMU, VMware, uye Hyper-V.
Iyo itsva ISOs yave kuwanikwa
Vashandisi vanofarira kuyedza kana kuisa Android-x86 9.0-r1 pakombuta yavo vanogona kurodha zvidhori zvitsva zveIO kubva Iyi link. Kana iwe ukadaro, usazeze kusiya zvako zviitiko mune zvakataurwa. Mamwe ruzivo mu kusunungura manotsi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Android-x86 9.0-r1 inouya nerutsigiro rwemazhinji-ekubata mapaneru uye izvi zvimwe zvekuvandudza
Alfonso Morales akadaro
Izvo chete zvinokanganisa ndezvekuti rutsigiro rwekudzoreredza harusati rwabatanidzwa kuitira kana mushandisi wekupedzisira achida kudzorera kune yakasarudzika tsika kubva kuiyo system interface.
Pindura kuna Alfonso Morales
MakuluLinux LinDoz, inouya zvichibva paUbuntu 18.04.4, Kernel 5.3 uye zvimwe